‘फेसबुकमा रवीन्द्र मिश्र बलिया, ग्राउण्डमा म’ - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
प्रकाशमान सिंह भन्छन्: वामगठबन्धनले पनि काठमाडौंमा कांग्रेसलाई असर गर्दैन
माधव धिताल काठमाडौं कार्तिक २६
स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी र वामगठबन्धनको झण्डै हाराहारी मत पाएको काठमाडौं–१ का कांग्रेस प्रत्यासी हुन्, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा महामन्त्री प्रकाशमान सिंह। त्यसैक्षेत्रमा चर्चित पत्रकार रवीन्द्र मिश्र र वामगठबन्धन माओवादी केन्द्रका युवा नेता अनिल शर्माले सिंहलाई दर्‍हो चुनौति दिएपछि यो क्षेत्र राजधानीको 'हटस्पट' बनेको छ। प्रस्तुत छ, काठमाडौं–१ को प्रतिस्पर्धा र प्रतिस्पर्धीका बारेमा सिंहसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी:
चुनाव नजिकिएसँगै घरदैलो अभियानलाई बाक्लो बनाउँदै लग्नु भएको छ, कस्तो हुँदैछ?
जनताको घरदैलोमा पुगेर मत माग्ने काम चलिरहेको छ। चुनाव भएरमात्रै होइन, म चुनाव अघि पनि जनताको घर दैलोमै थिएँ। अहिले पनि निरन्तर भेटघाट र जनताका सुख–दुःखका कुरा सुनिरहेको छु। विकास निर्माणको काम कति भएको छ भनेर बुझिरहेको छु, अब के के गर्नु पर्नेछ भन्ने विषयमा पनि राय लिइरहेको छु। जनताले पनि 'तपाईंको आवश्यकता यो क्षेत्रलाई अझै छ' भनिरहनु भएको छ। राम्रोसँग अभियानमा सक्रिय भएका छौं।
तपाइँं छैटौं पटक चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। तपाईंलाई नै जनताले किन र केका लागि भोट दिने?
पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि कम्युनिष्टहरुले चार–चार वटा सरकार बनाए। तर, संविधान जारी नै नभएर संसद भंग भयो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट बल्ल कांग्रेस पहिलो पार्टीका रुपमा उदय भयो। कम्युनिष्टहरुले सबै ठूलठूला नारा दिनेहरुले अबसर पाउँदा गर्न नसकेको काम कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी गर्न सफल भयौं। कम्युनिष्ट र अरु दलले नारा दिन्छन् अवसर दिँदा पनि काम गर्दैनन्, गर्न सक्दैनन्। तर, ‘कांग्रेसले बोलेको कुुरा गर्‍यो’ भनेर मतदाताहरु सन्तुष्ट छन्। अब मुलुकलाई सम्बृद्धितर्फ लैजान पनि यो क्षेत्रका मतदाताले मलाई जिताएर पठाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास मलाई छ।
काठमाडौं–१ का लागि केही नगरेको भनेर स्थानीयवासीहरु उत्तिकै असन्तुष्ट पनि त छन् नि!
भोट माग्न जाँदा जनताले विकासको काम भएन भनेर गुनासो गरेका छैनन्। विकास निर्माणको काम स्थानीय बासिन्दाको माग बमोजिम स्थानीयलाई नै सहभागी गराएर गरेको छु। सांसद विकास कोषका अलावा विभिन्न मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गराएको छु। काठमाडौं–१ को सामुदायिक स्कूलमा अपर्झट पस्नुस्, बुझ्नुस्– मैले के गरेको छु, देख्न सक्नु हुनेछ। धोविखोला करिडोर निर्माणको कामलाई तीब्रता दिने कामपनि भएको छ। काठमाडौं–मा पर्ने जति क्रियापुत्री भवन छन्, जाडो महिनामा तातो पानी आउने प्रवन्ध मैले मिलाइदिएको छु। पद्मकन्या स्कूलमा छात्राहरुका लागि आधुनिक गल्र्स होस्टेल निर्माण गरिदिएको छु।
मतदाताहरुले के भन्छन् त?
‘फेरि पनि तपाईंलाई नै अबसर दिन्छौं, बाँकी रहेका विकास निर्माण लगायतका काम फेरि जितेर गएपछि पुरा गरिदिनु पर्‍यो’ भन्नु भएको छ।
एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको तालमेलले अप्ठेरो पार्दैन?
मलाई मात्रै होइन, गठबन्धनले कांग्रेसका कुनै पनि उम्मेदवारलाई काठमाडौंमा हराउन सक्दैनन्। म त झन् सहजरुपमा जित्छु। बहुमत मतदाता मेरै पक्षमा छन्।
तपाईं भन्दा रवीन्द्र मिश्रको चर्चा धेरै छ नि?
कसैको पत्रपत्रिकामा राम्रो चर्चा होला, मिश्रजीको फेसबुक र ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा राम्रो प्रचार होला। तर, तर 'ग्राउण्ड' मा म बलियो छु।
तपार्ईंको मुख्य प्रतिद्धन्दी को हो त?
वामगठबन्धनका अनिल शर्मा र विवेकशील साझा पार्टीका रवीन्द्र मिश्र दुवैजना मेरा प्रतिस्पर्धी होइनन्।
प्रतिद्धन्दी होइनन् भने रवीन्द्र मिश्रप्रति किन आक्रामक भइरहनु भएको छ त?
म कसैप्रति आक्रामक छैन। म आफ्ना कुरा राखेर हिँडिरहेको छु। सैद्धान्तिक गरेको छु। कसैलाई आक्रमण गर्ने, खुइल्याउने काम मबाट हुँदैन।
‘गणेशमान सिंहको लौरो’ मानिएका हरिबोल भट्टराईको बागी उम्मेदवारले पक्कै अप्ठेरो पार्छ, होइन?
हरिबोलजीले कांग्रेस छोडिसक्नु भएको छ। उहाँ कांग्रेस नरहेकाले मलाई कुनै असर गर्दैन।
आफूलाई आफैलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि अघि सार्नु भएको रहेछ। यसरी पनि प्रधानमन्त्री भइन्छ?
पार्टीको उपसभापति, महामन्त्री जस्ता जिम्मेवारी सम्हालिसकेको नेता हुँ। उपप्रधानमन्त्री पनि भइसकेको छु। अब हुने भनेको प्रधानमन्त्री नै हो। पार्टीभित्र धेरै साथीहरु प्रधानमन्त्री बन्न लायक हुनुहुन्छ। त्यसमध्येको एक म पनि हुँ। म जत्तिको मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि नबढाउने पनि हुन्छ र? मलाई विश्वास छ, चुनाव जितेर गइसकेपछि मलाई नै पार्टीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्छ।
समग्रमा कांग्रेसको यो निर्वाचनमा कस्तो स्थिति देख्नु भएको छ?
एमाले–माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनेको छ। त्यसले चुनौती अवस्य थपेको छ। तर, कांग्रेस कमजोर छैन। धेरै पटक एक्लै चुनाव लड्दा पनि जितेका छौं। यो पटक पनि जित्छौं।
प्रकाशित २६ कार्तिक २०७४, आइतबार | 2017-11-12 19:34:22